मेक्सिको को7विशिष्ट पकवान जुन तपाईं कोशिस गर्नु पर्छ यात्रा समाचार
मेक्सिकोको Mexico विशिष्ट डिशहरू जुन तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ
लुइस मार्टिनो | 28/04/2021 13:28 | Gastronomy, मेक्सिको
मेक्सिकन खानाको बारेमा कुरा गर्नु भनेको सबैभन्दा पहिले, ग्यास्ट्रोनोमीको रूपमा वर्गीकृत गर्नु हो मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत युनेस्को द्वारा यस अवस्थाले तपाईंलाई यसको व्यञ्जनको हिसाबले मेक्सिकोको महत्त्व र समृद्धिको एक विचार दिनेछ र किन हामी तपाईंलाई typ विशिष्ट मेक्सिकन खाना बनाउँदछौं जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न।
वास्तवमा, हामी दुबै यसको सामग्रीहरूको रूपमा र यसको भाँडाको विविधता को हिसाबले, संसारमा सबैभन्दा विविध भोजन को एक सामना गर्दै छन्। हामी भन्न सक्दछौं कि प्रत्येक राज्य र यहाँ सम्म कि प्रत्येक शहरको आफ्नै भान्छा छ। जे होस्, हामी तपाईसँग मेक्सिकोको विशिष्ट खानाको बारेमा सामान्य अर्थमा कुरा गर्नेछौं, त्यो हो व्यंजनहरु सम्पूर्ण देश मा साझा.
1 मेक्सिकोको विशिष्ट खाना: इतिहासको एक बिट
2 सात पकवान जो मेक्सिकोको विशिष्ट खाना बनाउँछ
2.2 बुरिटो र फाजिटास
2.3 तिल, मेक्सिकोको विशिष्ट खाना बीच अर्को क्लासिक
2.4 सानो सुँगुर पाइबिल
2.5 Escamoles र टिभी
2.7 डेसर्टहरू: बीन क्यान्डी
मेक्सिकोको विशिष्ट खाना: इतिहासको एक बिट
हालको मेक्सिकन ग्यास्ट्रोनोमी यसको परिणाम हो प्रि-कोलम्बियाई सब्सट्रेट र स्पेनिश विरासतको संश्लेषण। अफ्रिकी, एशियाली, मध्य पूर्वी र फ्रान्सेली प्रभाव पनि यसमा थपिएको छ। प्रि-हिस्पैनिक संसारबाट यसले यसको धेरै सामग्रीहरू लिएको छ। उदाहरण को लागी, मकै, खोर्सानी, सिमी, टमाटर, भोकडो र असंख्य मसला pápalo, epazote वा पवित्र पात.
तर ती सबैलाई युरोपबाट ल्याएर सामेल भयो जस्तो गहुँ, चामल, कफि र सुगन्धित जडिबुटीहरू मनपर्दछ तेज पात, जीरा, ओरेगानो, स्पियरमिन्ट वा धनिया। तिनीहरू यहाँसम्म कि स्पेनिशको साथ आएका थिए मासु जस्तो सुँगुर र कुखुराको रूपमा y फलहरू जस्तै सुन्तला, कागती वा केरा.
जस्तो कि हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं, यी सबैको नतीजाहरू एउटै व्यंजन हुन् विविधता Aztec देश बनाउने बिभिन्न राज्यहरू बीच। बाजा क्यालिफोर्नियाको ग्यास्ट्रोनोमीको बारेमा कुरा गर्नु नै चियापासको बारेमा गर्नु भन्दा फरक छैन। तर मेक्सिकोको सबै विशिष्ट खानाको साझा आधार हुन्छ। हामी भन्न सक्दछौं कि यो सबै जस्तो सामग्रीमा आधारित छ मकै, खोर्सानी र सिमीनिश्चित रूपमा पाक कला त्यो खेल।
सात पकवान जो मेक्सिकोको विशिष्ट खाना बनाउँछ
मेक्सिकन खाना बनाउने प्रचुर किसिमका व्यंजनहरू हामीलाई एक लेखमा सारांश गर्न असम्भव बनाउँदछ। तसर्थ, हामी सात टिपिकल डिसेसमा फोकस गर्नेछौं जुन तपाईले देशको कुनै पनि क्षेत्रमा पाउन सक्नुहुन्छ सुनोरा माथि वेराक्रुज़ (हामी तपाईंलाई दिन्छौं) यहाँ यस शहर को लागी एक गाईड छ) र बाट जलिस्को माथि Quintana रू। त्यसकारण, हामी तपाईंलाई मेक्सिकोबाट हाम्रो ग्यास्ट्रोनोमिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छौं।
हुनसक्छ ती थाली हुन् धेरै लोकप्रिय मेक्सिकोको, त्यस्तो बिन्दुमा कि उनीहरूले यसको सिमाना पार गरेको छ र आज संसारमा कहिँ पनि फेला पार्न सकिन्छ। तिनीहरू देशको खानामा यति महत्त्वपूर्ण छन् कि यसको जनसंख्याले सिर्जना गरेको छ वाक्यांश सेट गर्नुहोस् तिनीहरुसँग। उदाहरणको लागि, "टाको फाल्नु" खानको लागि पर्यायवाची हो वा "प्रेमको अनुपस्थितिमा, केही टाकोस पादरी।"
चाखलाग्दो कुरा, तपाईंको नुस्खा तयार गर्न सजिलो हुन सक्दैन। बारेमा मकै वा गहुँको पीठो टर्टलहरू जस भित्र एक घटक राखिएको छ। र ठ्याक्कै यहाँ ट्याकोसको मूल्य छ किनकि उनीहरू भित्र जे छ त्यसमा निर्भर गर्दै, तिनीहरूले विशाल भाँडा माझ्छन् र बिभिन्न नामहरू प्राप्त गर्दछन्। तर दुई सबैभन्दा लोकप्रिय:
पास्टरको टेकोस। हामीले तिनीहरूलाई पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, तर अब हामी उनीहरूलाई के भन्छौं बताउनेछौं। सामान्यतया, यसको भरिने म्यारपेटेड पोर्क हुन्छ, यद्यपि यो भाँडा पनि हुन सक्छ। यो मरीनाडे मसला, अकोटे र भुइँ रातो चिलीको साथ तयार छ। प्याज, अनानास, र धनिया पनि थपिएको छ, साथै ससको एक विस्तृत विविधता।
गोल्डन टेकोस। तिनीहरूको मामलामा, भरण चुर्तीको कुखुराको मासु, सिमी र आलुको साथ बनाईन्छ। तिनीहरूले यस तरिकाले त्रेकाइन्छ र त्यसपछि ग्रेटेड चीज, सलाद र सॉस थपिन्छन्। केही क्षेत्रहरूमा, तिनीहरू अर्को हरियो सास वा कुखुराको ब्रोथको साथ खाइन्छन् जहाँ तिनीहरू भिजेका छन्।
बुरिटो र फाजिटास
Burritos, मेक्सिको को विशिष्ट खाना बीच क्लासिक्स
यद्यपि अन्य व्यंजनहरू मान्न सकिन्छ, तिनीहरू अझै छन् भरिएका ट्याकोस बिभिन्न उत्पादनहरूको। सामान्यतया तिनीहरू मासु, खुर्सानी, प्याज र चिली को बिभिन्न प्रकारका हुन्छन्। थप रूपमा, तिनीहरू सामान्यतया साथ हुन्छन् ताजा गेडाहरू र अन्य गार्निशहरू।
हामी तपाईंलाई यस बारे मा नै भन्न सक्छौं quesadillas। तिनीहरू पनि मकैको केक हुन्, यद्यपि तिनीहरूको विशेषता यो हो कि चीज उनीहरूको भर्ने भाग हो। जहाँसम्म, यदि तपाईं अधिक मूल कुरा प्रयास गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, परम्परागत सामग्रीको अतिरिक्त वाहकको लागि सोध्नुहोस् फ्लोर डे क्यालाबाजा.
तिल, मेक्सिकोको विशिष्ट खाना बीच अर्को क्लासिक
एज़्टेक देशमा, कुनै प्रकारको चटनीले बनेको हुन्छ खोर्सानी, खुर्सानी र अन्य मसला को नाम प्राप्त गर्दछ तिल। यसबाट एभोकैडो र ती तरकारीहरूसँग बनाइएको चीज लिइएको हो। तपाईंले अनुमान लगाउनुभए जस्तै, हामीले यसका बारेमा कुरा गर्‍यौं guacamole, सायद यसको सिमाना बाहिर मेक्सिको मा सबै भन्दा राम्रो ज्ञात सास। एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाइँलाई बताउँदछौं कि यो पूर्व कोलम्बियाई कालको हो र म्यानहरूका लागि यसमा कामुक प्रतीकवाद थियो।
यद्यपि, आजकल, अधिक विशिष्ट प्रकारको सॉसलाई मोल भनिन्छ जुन मेक्सिकोको विशिष्ट खानासँग सम्बन्धित छ। यो त्यो मिर्च खुर्सानी र अन्य मसलाको साथ पनि बनेको हो, तर योसँग एक छ चकलेटरी लुक। विस्तार द्वारा, यसलाई पनि भनिन्छ मासु वा तरकारी स्ट्यु यस सॉसको साथ बनाईएको.
यद्यपि प्रत्येक राज्यको आफ्नै विधि छ, मेक्सिको भित्र सब भन्दा बढी सराहना गरिन्छ तिल पोब्लानो। यो यति लोकप्रिय छ कि प्रत्येक वर्ष, यो मा मनाइन्छ Puebla un तिहार यो चटनी समर्पित। यो विभिन्न प्रकारको मिर्च मिर्च, टमाटर, प्याज, लसुन, गाढा चकलेट र मसलाको साथ बनाईन्छ। यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो भने, तपाईं निराश हुनुहुने छैन।
सानो सुँगुर पाइबिल
Pibil म्यान टर्म हो जुन A मा तयार गरिएको कुनै पनि खानालाई सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरियो पृथ्वी चुलो। यो यस रूपमा चिनिन्थ्यो pib र जहाँ यो डिशको नाम आउँदछ। मूल रूपमा, यो मा लोकप्रिय थियो युकाटान प्रायद्वीप, एक अनमोल भूमि जहाँ तपाइँको लेखमा सिफारिस गरिएको तपाइँले भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो सम्पूर्ण मेक्सिको र सम्पूर्ण विश्वमा फैलिएको छ।
समावेश गर्दछ सुँगुर Achiote मा marinated, एक मसला कि पूर्व कोलम्बियाई समयमा पनि प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि यो पृथ्वी ओभनमा राखिन्छ वा उस्तै बैजनी प्याज, हाबानेरो मिर्च र खट्टा सुन्तलाको साथ। यो सबै केरा पातमा लपेटिन्छ यसलाई सुकाउनबाट रोक्नको लागि र रातभर पकाउन छोडिन्छ।
तार्किक रूपमा, यो थाल अब यस्तो परम्परागत तरीकाले बनाइएको छैन, तर यो अझै पनी स्वादिष्ट नै छ। चटनीको लागि, अचिओटले मात्र हस्तक्षेप गर्दैन, ओरेगानो, जीरा, जैतुनको तेल, सिरका र खट्टा सुन्तलाको रस पनि थपिन्छ।
Escamoles र टिभी
हामी यस पकवानलाई मेक्सिकोको विशिष्ट खाना बीचमा समावेश गर्दछौं किनकि यो यसको अंश हो, तर हामी तपाईंलाई चेताउनी दिन्छौं कि, सायद तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। कारण धेरै सरल छ। एस्केमोलहरू हुन् कंकड कमिला लार्भा कि कोलम्बियाको समय देखि Aztec देश मा खाइन्छन्। यदि हामीले तपाईंलाई भन्यौं कि उनीहरूलाई पनि बोलाइन्छ "मेक्सिकोको क्याभियार", तपाईं कत्ति सराहना गर्नुहुन्छ भनेर एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू प्राय: भुटेका र अण्डा र मसालाहरू जस्तै इजाजोटसँगै खाइन्छन्।
यसको अंशको लागि, हामी तपाईंलाई फोहोरहरूकै बारेमा बताउन सक्छौं। बारेमा सानो टिभी तिनीहरू पनि एपिरेटिफको रूपमा वा टाकोस र क्वेस्डिलाजहरूमा पनि भुटेका पकाइन्छन्। जे भए पनि दुबैलाई प्यालेटहरू साहसी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
यो जबरजस्ती स्टिक यसमा ब्रोथको अतिरिक्त ककाहुआजिन्टल प्रजाति, कुखुरा वा सुँगुरको मासु र अन्य धेरै सामग्रीहरू छन्। यी मध्ये, उदाहरणका लागि, प्याज, सलाद, बन्दकोबी, मूली, एवोकाडो, चीज वा पोर्क रिन्डहरू।
र यो यो हो कि तपाईं आफैले आफैलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ pozole को धेरै प्रकारहरु। जे होस्, तिनीहरू सबै दुई कोटिहरूमा पर्दछन्: यो सेतो, सरल किनकि यसको मात्र मकै र मासु छ र मसलादार, अधिक विस्तृत र त्यो धेरै मसलादार स्वाद हुन सक्छ।
हामीले पूर्व-हिस्पैनिक समयमा यसको उत्पत्ति पनि हेर्नु पर्छ। वास्तवमा यसको नाम नहुआटलबाट आउँदछ tlapozonalli, जसको अर्थ "उमालेको" वा "स्पार्कलिंग" हो, जबकि अन्य सिद्धान्तहरूले सुझाव दिन्छ कि यसले यसको नामलाई .णी बनाउँछ पोसोली, Cahita भाषाको शब्द हो जसलाई "कुकि corn मकै" को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ।
डेसर्टहरू: बीन क्यान्डी
हामी मिठो मेक्सिकन खानाको मिठाईको बारेमा कुरा नगरी हाम्रो यात्रा समाप्त गर्न सक्दैनौं। केहि मानिसहरुसंग जुन हामी हाम्रो देशमा चिन्छौं। व्यर्थमा होईन, हामीले पहिले नै भनेका थियौं कि मेक्सिकन खानामा कडा हिस्पैनिक अवयव छ। यो कुरा हो Churros, the खिर, the पखेटा वा jericallas, हाम्रो कस्टर्ड जस्तै।
यद्यपि अन्य मिठाईहरू साँच्चिकै स्वदेशी हुन्। ती मध्ये एक हो बीन क्यान्डी, एक उत्पादन Aztec देश को ग्यास्ट्रोनोमी मा यति उपस्थित छ। यो दुध, अण्डाको भुई, दालचीनी, चिनी, कुचिएको बदाम, अखरोट र कर्नोस्टार्चबाट बनेको हुन्छ, थप रूपमा, नुन बिना पकाइएको सिमीबाट पनि।
तर तिनीहरू पनि धेरै लोकप्रिय छन् लीभरहरू, एक प्रकारको केक जुन पानी, मह, अनसाल्ट्ट बदाम र माखनको साथ तयार छ। हामी तपाईंलाई पनि यस्तै कुरा भन्न सक्छौं कालो sapote, जसको आधार तथाकथित रूखको फल हो र जो अण्डाहरू, दालचिनी र चिनीसँग अन्य सामग्रीहरूको साथ हुन्छ। यसको स्वाद धेरै जिज्ञासु छ, चकलेटको जस्तै आश्चर्यजनक छ। अन्तमा, हामी सिफारिस गर्दछौं कर्नब्रेड वा भाँडामा ताजा मकै। यसलाई मीठो पार्न यसले दूध र दालचिनीको साथसाथै अन्य सामग्रीहरू जस्तै अण्डाहरू, बटर र पीठोसँग गाढा बनाएको छ। केवल स्वादिष्ट।
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई सात व्यंजनहरू बारे बतायौं जुन तपाईंको हाइलाइट अप गर्दछ मेक्सिको को खाना विशिष्ट। यद्यपि हामी अरूलाई पनि समावेश गर्न सक्दछौं चूना सूप, लोकप्रिय तामेलहरू, the tortilla चिप्स वा marquesitas। अगाडि बढ्नुहोस् र तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » मेक्सिको » मेक्सिकोको Mexico विशिष्ट डिशहरू जुन तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ
वसन्त carतुमा कार द्वारा हेर्नका लागि उत्तम स्पेनिश शहरहरू
रोम जानु अघि9वटा चलचित्रहरू